Xaasaska Wayne Rooney Iyo Jamie Vardy Oo Loo Balamiyay Ciyaar Feer Ah Ka Dib Markii Uu Qilaafkooda Meel Xun Gaaray | Laacib.net
Xaasaska Wayne Rooney Iyo Jamie Vardy Oo Loo Balamiyay Ciyaar Feer Ah Ka Dib Markii Uu Qilaafkooda Meel Xun Gaaray
October 11, 2019 Balaleti Comments Off on Xaasaska Wayne Rooney Iyo Jamie Vardy Oo Loo Balamiyay Ciyaar Feer Ah Ka Dib Markii Uu Qilaafkooda Meel Xun Gaaray
Ninka soo agaasima ciyaaraha feerka Eddie Hearn ayaa doonaa inuu qaban qaabiyo ciyaar feer ah oo ay ku kala baxaan Coleen Rooney iyo Rebekah Vardy sannadka danbe iyadoo lacagta ka soo baxda dagaalkooda tabarucaad lagu bixin doono.
Shirkada musaaricada ee WWE ayaa iyadana xiiseyneysa in qaban qaabiyaan dagaal musaarico ah oo ay xaasaskaan colaada ka dhaxeyso ay ku kala baxaan.
33 jirta uu qabo halyeeyga Manchester United Wayne Rooney ayaa ku eedeysay xaaska Jamie Vardy inay si joogta ah ugu wargelin jirtay wargeyska The Sun wax walba oo ay soo dhigto akoonkeeda qaaska ah ee Instagram.
Coleen ayaa go’aansatay inay ogaato qofka wararka ku saabsan nolosheeda u gudbiya wargeysyada iyadoo akoonkeeda ka xiratay dhamaan dadkii ugu jiray marka laga reebo Rebekah Vardy.
Waxa ay ka dib akoonkeeda qaaska ah ee Instagram ay soo dhigtay warar been ah oo ku saabsan nolosha iyada iyo seygeeda Wayne Rooney si ay u aragto haddii ay The Sun daabici doonaan, iyadoo wargeyska The Sun uu daabacay wararkaas.
Wararka beenta ah ee ay akoonkeeda qaaska ah dhigtay waxaa kaliya arki kartay xaaska Vardy, waana sababta ay Coleen Rooney shaaca uga qaaday in Rebekah ay tahay qofta wararka ku saabsan nolosheeda qaaska ah u gudbiya wargeysyada.
Rebekah Vardy oo 37 sanno jir ah ayaa la sheegay inay taleefanka ka wacday Coleen Rooney iyadoo ooyneysa si ay ugu sharaxdo waxa dhacay, laakiin xaaska Rooney ayaa diiday inay aqbasho sharaxaadeeda.
Xaaska Vardy ayaana bilowday inay aflagaadeyso Coleen Rooney iyadoo wareysi ay shalay siisay Daily Mail ku sheegtay in muran ay la gasho Coleen inay la micno tahay adigoo la murmaraya shimbir.
“Coleen waa sida Shimbir si kasta oo aad u la muranto shimbirta ma aqbaleyso inay qaldan tahay ugu danbeyna waxa ay kaaga saxarooneysaa madaxa” ayay tiri.
Hearn ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in dagaal feer ah uu ka qaban qaabiyo England oo ay isaga horimaanayaan Rebekah oo haatan uur shan bilood ah leh iyo Coleen oo uu qabo kabtankii hore ee England Wayne Rooney.
Isagoo u hadlayay IFL TV, Hearn ayaa sheegay inuu doonaya in labada hablood ay wixii muran ah ku dhameystaan xerada dagaalka.
Hearn ayaa doonaya in ciyaarta feerka ay noqoto mid tabarucaad ah islamarkaana la qabto marka Rebekah Vardy ay dhasho canugeeda shanaad oo ay soo kabsato.
Wuxuu yiri: “Waxaan u qaban lahaa hay;ada Sport Relief, ciyaar tabarucaad ah.
“Waxaan aaminsanahay inay feer fiican soo bandhigi lahaayeen. Ciyaar weyn ayay noqon laheyd miyaysan aheyn? Immisaa iibsan laheyd? Malaayiin”
TOP 5: Petr Cech, Maldini Iyo Shan Xiddig Oo Markii Ay Kubada Cagta Ka Fariisteen Isku Dayay Isboorti Kale + Sawirro